विप्रेषणमाथि अधिक निर्भरताको जोखिम - Naya Patrika
विप्रेषणमाथि अधिक निर्भरताको जोखिम
दुनबहादुर बुढाथोकी | बैशाख ०८, २०७४
विप्रेषण ! जसको भरमा अर्थतन्त्रमा रक्त सञ्चार भइरहेको छ । वैदेशिक रोजगार ! जुन विप्रेषण भित्राउने गतिलो माध्यम हो । नेपाली कामदार ! जो थ्रिडी अर्थात् डर्टी, डेन्जर र डिफल्ट कार्य गर्न किञ्चित धक मान्दैनन् । त्यसो त विप्रेषण नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बनिसकेको छ । जिडिपीको आधारमा विप्रेषण भित्राउने मुलुकको कोटीमा नेपाल पाँचौँ स्थानमा छ । विप्रेषण, ०६८-६९ मा तीन खर्ब १५ अर्ब भित्रिएकोमा ०७२-७३ मा यो आँकडा ६ खर्ब ७९ अर्ब पुगेको छ । भारत र अनौपचारिक क्षेत्रबाट भित्रिने विप्रेषणसमेत हिसाब गर्दा यो सात खर्बभन्दा बढी हुन्छ, जुन औसत दैनिक एक अर्ब ९१ करोडको आँकडा हो । ०७२-७३ मा भित्रिएको विप्रेषण जिडिपीसँगको अनुपात ३२.१ प्रतिशत छ । जुन सोही वर्षको बजेटको ८१.२० प्रतिशत र राजस्व आयको १३७ प्रतिशत हो । तथापि, कुल कामदारमध्ये अदक्ष तथा अर्धदक्ष कामदारको हिस्सा भीमकाय छ । जहाँ, दक्ष एक प्रतिशत, अर्धदक्ष २५ प्रतिशत र अदक्ष ७४ प्रतिशत बाहिरिएका छन् ।
विप्रेषणबाट प्राप्त हुने आयको वृद्धिदर पछिल्ला दिनमा घट्दो क्रममा छ । ०६५-६६ मा ४७ प्रतिशतले वृद्धि भएको विप्रेषण आय ०७१-७२ मा १३.६ प्रतिशत र ०७२-७३ मा १० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । तथापि, ०६५-६६ मा विप्रेषण आय जिडिपीको २१.२ प्रतिशत रहेकोमा ०७२-७३ मा ३२.१ प्रतिशत पुगेको छ । प्रस्तुत आँकडाबाट बुझ्न सकिने कुरा भनेको नेपाल विप्रेषणको आयमाथि अन्धाधुन्ध निर्भर बन्दो छ भन्ने नै हो । जब कि विप्रेषण दीर्घकालीन आर्थिक स्वास्थ्यका लागि हितबर्धक हुन सक्दैन ।
त्यसो त दुई दशकयता नेपालको अर्थतन्त्रमा मूलभूत परिवर्तन भएको छैन । तैपनि गरिबी दिनानुदिन घटिरहेको छ । ०५२-५३ ताका ४२ प्रतिशत रहेको गरिबी, ०६७-६८ मा २५.१६ प्रतिशत हुँदै ०७१-७२ मा २३.८२ प्रतिशतमा ओर्लिएको छ । गरिबी घट्नु वस्तुतः विप्रेषणकै कमाल हो । केही वर्षअघिको विश्व मन्दीले असर गर्न नसक्नुमा पनि विप्रेषणकै हात रहेको थियो । परन्तु, विप्रेषणको उपयोग उत्पादनमूलक क्षेत्रमा अत्यन्त न्यून हुँदा आर्थिक वृद्धिमा भने टेवा पुग्न सकेको छैन । पछिल्लो एक दशकको औसत आर्थिक वृद्धि ४.१ प्रतिशत मात्र हुनुले यो पुष्टि हुन्छ ।
मनग्य विप्रेषण भित्रिएकोमा शंका गर्ने स्थान छैन । तर, गाँठी कुरा विप्रेषण भित्रिनु ठूलो होइन । खाँटी कुरा त विप्रेषणको उपयोग के, कति, कहाँ र कसरी गरियो भन्ने हो । वार्षिक ६ खर्ब ७९ अर्ब भनेको थोरै राशी होइन । ठिकै छ, पुरै राशी बचत गर्न नसकिएला, मानिलिऊँ ५० प्रतिशतचाहिँ उपभोगमै सिध्याइएला, बाँकी ५० प्रतिशत भनेको ३.४० खर्ब हो । सो ३.४० खर्ब भन्नु थोरैतिनो रकम होइन । सो ३.४० खर्बको अवसर लागत (अपर्चुनिटी कस्ट) प्रतिमेगावाट सरदर २० करोडका दरले १७ सय हजार मेगावाट जलविद्युत् वा प्रतिकिलोमिटर सरदर दुई करोडका दरले १७ हजार किलोमिटर पक्की सडक अथवा प्रतिकिलोमिटर सरदर १० करोडका दरले तीन हजार चार सय किलोमिटर रेल्वे लाइन निर्माण गर्न सकिने राशी हो । यहाँनेर चिन्ता गर्नुपर्ने विषय भनेको विप्रेषणको समुचित उपयोग भइरहेको छ वा छैन, विपे्रषणको प्रयोग जलविद्युत्, सुरुङमार्ग, रेल्वे वा यस्तै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भयो वा भएन भन्ने हो । तर, दुर्भाग्यको कुरा यी र यस्ता क्षेत्रमा विपे्रषणको किमार्थ सदुपयोग हुन सकेको छैन । पछिल्लो जीवनस्तर सर्वेक्षणले विप्रेषणको ७९ प्रतिशत उपभोगमा, सात प्रतिशत ऋण भुक्तानीमा र बाँकी शिक्षा, स्वास्थ्यमा खर्चिने गरिएको देखाएको छ । कुल विप्रेषणको दुई प्रतिशत मात्र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग हुन सकेको छ । जब कि घरजग्गा, जमिन, सुन, टिभी, फ्रिज, कारमा खर्र्चिएको रकमले न त राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि गर्छ, न त आयात प्रतिस्थापन नै ।
दैनिक १५ सय हाराहारीमा युवा पलायन हुँदा उनीहरूबाट औसत दैनिक १.८६ अर्ब भित्रिरहेको, साँचो हो । अब प्रश्न उठ्छ, कि वैदेशिक रोजगार श्रमशक्ति थेग्ने अजरअमर औजार हुन सक्छ ? सवाल यो पनि उठ्छ कि विप्रेषण मुलुकको आर्थिक स्वास्थ्य तन्दुरुस्त राख्ने अचुक उपाय हुन सक्छ ? अथवा विप्रेषणबाट उद्योगधन्दा, कलकारखाना, जलविद्युत्, रेल्वे, सुरुङमार्ग निर्माण हुन सक्छ ? भए गरेका नजिर छन् ? उत्तर हो– वैदेशिक रोजगार श्रमबजारमा ओइरिने साढे चार लाख श्रमशक्तिलाई थेग्ने औजार हुन सक्दैन । विप्रेषणद्वारा आर्थिक स्वास्थ्य दीर्घकालसम्म हृष्टपुष्ट र निरोगी राख्न पनि सकिँदैन । विप्रेषणको बलबुतामा कुनै मुलुकमा उद्योगधन्दा, कलकारखाना, जलविद्युत् आयोजना सायदै मौलाएका छन् । नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो छैन, रहन पनि सक्दैन । यसको आशय मानवपुँजी निर्यात र विप्रेषण आय केबल अड्को पड्को तेलको धूप मात्र हुन सक्छ । न कि आर्थिक स्वास्थ्य तन्दुरुस्त पार्ने दीर्घकालीन हतियार ! यहाँनेर भुल्नै नहुने कुरा भनेको, हामीले विदेशमा श्रम मात्र बेचिरहेका छैनौँ, बरु स्वाभिमान र सम्मानसमेत लिलाम गरिरहेका छौँ ! जब कि बेच्नुपर्नेचाहिँ सीप र हाम्रो बौद्धिकता हो । हामीले यो बुझिरहेका छैनौँ कि मानवपुँजी निर्यात गरेर दुनियाँमा कोही समृद्ध भएका छैनन् र हामी पनि समृद्ध बन्न सक्दैनौँ । यसर्थ, बर्सेनि पौने सात खर्ब विप्रेषण भित्रायौँ, एक सय १० मुलुकमा जनशक्ति पठायौँ भनेर नाक फुलाउनुको अलावा हाम्रो अर्थतन्त्र कतै कुबाटोमा हिँडिरहेको त छैन ? कथंकदाचित वैदेशिक रोजगारका ढोका बन्द हुन गए भने हाम्रो अर्थतन्त्र भीषण अन्योलमा पर्ने त होइन ? एकपटक सोच्नु आवश्यक छ ।
(बुढाथोकी नेपाल टेलिकमका व्यापार अधिकृत हुन्)